အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြရအောင်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့ရေ ( ၈ . ၅ . ၂၀၁၁ ) ရက်နေ့ဟာဆိုရင် အမေများနေ့ပါ၊ များသောအားဖြင့် အမေများနေ့ကို သားသမီးတော်တော်များများက မေ့နေတက်ကြတယ် သတိမထားမိတက်ကြဘူး ၊ အဲဒါကြောင့် အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရော ၊ အမေများနေ့ကို သတိရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ရော ပြီးတော့ အမေတို့ရဲ့ကျေးဇူးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ဗျာ။0nlineပေါ်မှ ရရှိစုဆောင်းထားတဲ့ ကဗျာများကို စုစည်း ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ရေးသားသူတွေစီကတော့ ခွင့်မတောင်းနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
Usage: [zdvideo width="x" height="x"]url[/zdvideo]
ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား သေမင်းကိုအံတု စံပြုလို့ ဖွားခဲ့တာ အမေ
မေတ္တာကိုအရင်းခံ အကျိုးကိုမမျှော်ကိုး အကြင်နာနဲ့ ကျွေးခဲ့တာ အမေ
လမ်းမှန်ကိုစေညွှန် ဘ၀ကိုလမ်းကြောင်းပေး လူလားမြောက်အောင် ပညာပေးခဲ့တာ အမေ
အပြစ်ကို အချစ်နဲ့ဖုံး သည်းခံလို့ မြင့်မိုရ်ထက် အကြွင်းမဲ့ခွင့်လွတ်ခဲ့တာ အမေ
တောင်းစုတ်ကို ပစ် ၊ သားဆိုးကို ချစ်လို့ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာရှင် အစားထိုးလို့မရနိုင်တာ အမေ
စည်သူဖြိုး ( ၂ . ၅ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ ညတွင် ရေးစပ်သည် ၊ အမေများနေ့ အထိန်းအမှတ် )
မင်းသန့်ဦး(၅.၅.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ညနေတွင် ရေးစပ်သည်၊ အမေများနေ့ အထိမ်းအမှတ်)
မေတ္တာတွေ ပေးနေတဲ့ အမေရယ်
( ၄-၁-၂၀၀၃)မှာကျရောက်တဲ့ အမေ့မွေးနေ့အမှတ်တရမှ
သွေးနို့စက်များ တိုက်ကြွေးသွားတဲ့ အမေ...
ဝါးဖတ်တော် ကဆီအနှစ် ခွံကြွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အမေ....
မေကြီး (သို့) အမေ...( အမေများနေ့ အမှတ်တရ )
လင်ကို ဘုရား ဆိုတဲ့ အမေ....
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:30 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook